UPDATE: Gool-hayihii hore Xulka Qaranka Somaliya oo lagu dhex dilay Masjid, xilli uu Taraawiix tukanayay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Gool-hayihii hore Xulka Qaranka Somaliya oo lagu dhex dilay Masjid, xilli...
UPDATE: Gool-hayihii hore Xulka Qaranka Somaliya oo lagu dhex dilay Masjid, xilli uu Taraawiix tukanayay
Marxuum Cabdiwali Colaad Gaatimow
Afgooye (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegaya, in caawa degmada Afgooye lagu dilay, goolhayihii kooxda Banaadir iyo xulka Qaranka Cabdiwali Colaad Gaatimow.
Marxuumka ayaa la sheegaya, in uu Salaada Taraawiixda ku dukanayay masaajid ku yaallo Degmada Afgooye, waxaana gudaha Masaajidka ugu galay rag hubaysan oo rasaas ooda kaga qaaday.
Gaatimow, ayaa hadda wuxuu ahaa Guddoomiyaha Ciyaaraha Degmada Afgooye ee Gobolka Shabellaha hoose, sidoo kalena ciyaaryahan khabiir ku ah dhanka arrimaha Sportiga, si weynna dalka looga yaqaan.
Sidoo kale wararka ayaa sheegaya, in kooxihii dilay Marxuumka ay ka baxsadeen Masaajidka dhexdiisa, kadib markii ay toogteen Marxuumka.
Cabdiwali Colaad Gaatimow. goolhayihii hore ee Xulka Qaranka